Inoshanda neElasticsearch, Solr, Algolia.
Zvese maficha uye ese mawedzero-anosanganisirwa
Dhawunirodha uye gadza pasina chero rezinesi pa:
localhost, dev.domain, test.domain, inoenda.domain
€	199 / Pagore
YEMAHARA 7 MAZUVA KUEDZA
Mahara mazuva manomwe kutongwa
Inoda nzira yekubhadhara
Kanzura chero nguva
Batsira kumisikidza iyo plugin
Vaka yako tsika mhinduro
Iwe une zvinyorwa zvizere here?
Eheka. Ndokumbirawo kuti muverenge guides.
Ndiri kuona mamwe mademo here?
Eheka. Ndokumbira ushanyire yedu Madhimoni makumi maviri. Iwe uchawana mademo eWooCommerce (anosvika zana zviuru zvigadzirwa), yeElementor, kune ese makuru madingindira pamusika, kumakambani ese anotambira, eElasticsearch, Apache Solr, Algolia, uye Weaviate.
Unogona kundiratidza mamwe makesi ekushandisa?
Eheka. Ndokumbira ushanyire yedu shandisa matambudziko uye Uchapupu
NDINOGONA KUTI RINYORI YEMAPURUGINI / MITEMO YAKABatanidzwa?
Eheka. Ndokumbirawo kuti muverenge maitiro uye plugins / themes.
Hapana chikonzero chekuve guru reSolr, Elasticsearch, Algolia, Weaviate. WPSOLR inotarisira kugadzira uye kugadzirisa indekisi dzekutsvaga. Iri basa rinowanzoitwa nevashoma nyanzvi mune yekutsvaga injini. Asi neWPSOLR, zviri nyore sekudzvanya bhatani.Iwe unosarudza muWPSOLR admin maitiro ekuratidza mhedzisiro, mafirita. Zviri nyore kwazvo uye muropa.
Isu tiri timu yevanogadzira WordPress uye nyanzvi dzekutsvaga. Mumakore apfuura apfuura, isu takaona akawanda mawebhusaiti ari kunetseka neiyo kutsvaga kweWordPress. Takasarudza kuvaka plugin kugadzirisa zviri pachena nyaya dzekutsvaga kweWordPress: inononoka, isina kururama, isingachinjiki.
Chii chinonzi mahara kurodha pasi?
Iyo yemahara yekurodha link inotora pasi WPSOLR, iine zvese maficha uye mawedzero-emahara Hapana mubvunzo wakabvunzwa, hapana nzira yekubhadhara yakabvunzwa, hapana rezinesi rinodiwa. Asi iwe unozogona kuishandisa chete pane bvunzo nharaunda, iine url inoenderana neaya eayo: localhost, dev.domain, muedzo.domain, staging.inotongwa
Ndeapi mazuva manomwe emahara TRIAL DOWNLOAD?
Iyo yekuyedza link ichatora WPSOLR, iine zvese maficha uye mawedzero-emahara. Maitiro ekubhadhara e0 € (zero) anozobvunzwa kubva kune yedu yekubhadhara processor 2checkout, iyo inokupa iwe kupinda kune rezinesi rinodikanwa kuti uite iyo plugin chero kupi. Unogona kukanzura kunyorera kwako chero nguva mukati memazuva manomwe kutongwa nekutevera chinongedzo chekudzima chakabatanidzwa mumaimeri edu ekusimbisa.
UNOGONA KUITA SEI RENESISI?
Ndokumbirawo uteerere gwara
CHII CHINONZI ELASTICSEARCH, SOLR, ALGOLIA, KUSIMBISA?
Ivo chidimbu che software chaunomisa pane yako server. WPSOLR inobata kutaurirana navo, mumatanho maviri. Indexing: iyo data yawaka sarudza inotumirwa ku "indexing" (kushandura data kuimwe inoshanda mamiriro ekutsvaga). Quering: iwo mazwi ekutsvaga uye mafirita anoitwa nenzira yakanyanya kwazvo
SEI NDINODA KUTI NDIKUDZIDZE, SOLR, ALGOLIA, NDINOGONESA?
Nekuti ivo ndeye emahara software yakatsaurirwa kutsvaga, uye inoshandiswa nemawebhusaiti makuru epasi. Ese SaaS inobatwa ekutsvaga masevhisi anoishandisa ivo, asi iwe hauzive, uye iwe unoripirwa yavo.
WPSOLR INOBVANANA SEI NEVADZIDZISI?
WPSOLR ndeye 100% iyo WordPress plugin. Nekudaro, ichave yakabatanidzwa zvakakwana mune yako theme template yekutsvaga.
IYI PURUGINI KANA IYO BASA RAKAITWA?
WPSOLR ndeye 100% yeWordPress plugin. Nekudaro, ichave yakanyatsobatanidzwa mune yako theme template yekutsvaga. Iwe gadza munharaunda yako imwe yemahara yakavhurika-sosi yekutsvaga injini, kana pakupedzisira kubhadhara a yakagadzirirwa injini yekutsvaga.
ndeupi rudzi rwehungwaru hwekugadzira kana muchina kudzidza iwe waunopa?
Isu parizvino tinopa kuburitsa ruzivo kubva kumavara ako uye mifananidzo, nekubatanidza kune mazhinji e Kudzidza Kwakadzika APIs
Kuuya nekukurumidza, isu zvakare tichabatana kune Weaviate Vhura-sosi Semantic yekutsvaga. Izvi zvinogonesa kutsvaga kwemitauro, mibvunzo & mhinduro, kurongwa, mune ese magwaro nemifananidzo.
NZIRA YOKUTENGA CHINYORWA CHITSVA?
"Iyi premium plugin inovimbisa nekukurumidza uye kwakaringana mhedzisiro yekutsvaga yako WordPress kana WooCommerce saiti"
"Maitiro ekugadza Elasticsearch paWordPress pa Cloudways"
"Turbocharge Yako Yekutsvagisa Kutsvaga Kwekushandisa Solr"
"Bhizinesi Kutsvaga neApache Solr uye WordPress"
Anopfuura mapeji miriyoni! CartoChrome yakashandurwa nekuda kwekukanganisa WPSOLR yakazviita. Basa ravo revatengi rine rugare. Parizvino, CartoChrome ine anopfuura mamirioni mapeji uye isu tiri kushanda pakuyera iyo zvakanyanya nekuda kweWPSOLR. Ini ndinokurudzira WPSOLR kune chero munhu anoedza kutora yavo yekutsvaga webhusaiti kune inotevera nhanho! Ndatenda, Patrice!
Stephen Umunna Muvambi weCartoChrome.com
WPSOLR yakaita yedu WooCommerce bhizinesi riitike! Isu tanga tichishandisa WPSOLR kwemakore mazhinji ikozvino. Yakatanga nekutsiva Woocommerce chigadzirwa kutsvaga neWPSOLR uye ikozvino tinoishandisa kuchitoro chakazara, zvikamu uye kusefa. Pasina WPSOLR hazvingagone kwatiri kuyera nenzira yakadaro nehafu yemiriyoni zvigadzirwa. Zvakaita kuti bhizinesi redu riite! Tsigiro yevatengi inokurumidza uye inobatsira zvakanyanya pazvinenge zvichidiwa. Plugin inobvumidza sarudzo zhinji dzinokodzera chero zvido zvemunhu. Usatarise kumberi kana iwe uchida mheni kutsvaga nekukurumidza uye kusefa mune WooCommerce shopu, iyo inogona kukwira kusvika kumamirioni ezvigadzirwa. 5 Nyeredzi chiyero, isina chaiko!
Victor Pires CEO we wemagri.com